U-Kim Kardashian Ufumana Ubume beBillionaire-Iindaba zaseNigeria kunye neSt Global
KIm Kardashian ifikelela kwisimo se-bilionea, intsholongwane entsha enamathuba ebhubhane afunyenwe, iJuventus kunye neBarcelona kwisivumelwano sokutshintsha. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. U-Kanye West ubhiyozela unkosikazi Kim Kardashian ngokuba yibhiliyoni
Kanye West noKim Kardashian West
Inkwenkwezi yomculo Kanye West ubhiyozela umfazi wakhe UKim Kardashian entshona ekufumaneni inqanaba lebhiliyoni.
"Ndinelunda ngomfazi wam omhle uKim Kardashian West ngokuba yibhiliyoni," U-Kanye ubhale kwi-Twitter. “Ukhe wafumana ezona zivuthuvungu zinamandla kwaye ngoku uThixo uyakhanyisela wena kunye nosapho lwethu. Ke busikelelekile obu bomi. Ke mna ndakwenzela obu bomi. Siyanithanda kakhulu. ” I-Kim Kardashian bilionea yeeNdaba.
I-twitter ka-Kanye iza emva kokuba inkosikazi yakhe ithengise nge-20 yeepesenti yenkampani yayo ye-KKW Ubuhle kwi-GOTY yobuhle beedola ezingama-200 zeedola. Isivumelwano sibhengezwe ngoMvulo i-KKW yobuhle kwi-1 bhiliyoni, ngokwenza ukuba uKim Kardashian West abexabisa i-900 yezigidi zeedola, ngokweqikelelo lukaForbes.
2. Ababini babanjiwe ngokuvelisa unyango olungamanyala lwe-COVID-19 eGhana
Amapolisa abambe abantu ababini ngezityholo zokwenza amayeza eherry athunyelweyo ukunyanga isifo se-coronavirus (COVID-19).
Imisebenzi engekho mthethweni yoogqirha abazityhilayoweyo bobabini, uGqr. UAdella, UMlawuli kaGqr. Adellah Herbal Ikhaya kunye noMncedisi wakhe woPhando, uGqr. Abdul Sarnad Bin Musa, bavezwa yintatheli yophando, I-Anas Aremeyaw Anas, kwiziqwenga zakhe zamva zokuphanda ezijolise ekukhanyiseni ukhanyiso kwi-COVID-19 isityholo esithi kufanelekile amashumi amawaka eedola.
Isiteyitimenti esikhutshwe liGunya lokutya neziyobisi (i-FDA) ngoMvulo, nge-29 kaJuni nesityikitywe nguMphathi oyiNtloko, Cima iDarko, zathi iimveliso ezingabhaliswanga, ezazisenziwa e-Kojo Ashong, ilali kufutshane ne-Amasaman, zazibhalwe i -xoki kwathiwa mazibe nenombolo yobhaliso ye-FDA FDB / TMP03709 kuzo zombini iimveliso kwaye zinoMatshi 2020 nango-Matshi 2021 njengemihla yazo yokuphelisa nokuphelisa ngokulandelelana. .
3. UMzantsi Afrika: Uqhanqalazo lobundlobongela olusekwe kwisini e-Durban luphela ekubanjweni aliqela
NgoMgqibelo, nge-27 kaJuni, abaqhankqalazi bahlanganisana elunxwemeni lwaseThekwini ukuzokwazisa ngobundlobongela obusekwe kwisini. Utshintsho kuzwelonke belucwangciswe ngumzabalazo we-anti-GBV weYunivesithi yaseStellenbosch emva kweeveki ezininzi zeengxelo kwaye ufuna ukuba kuthathwe lo mbandela.
Amapolisa afike kwakamsinya emva kokuba abaqhankqalazi beqokelele kwaye babayalela ukuba basasaze, besithi bayaphikisana nemithetho yokuvalwa kweenqanaba 3 kwaye abanamvume yokuhamba. Ababhikishi babenxibe imaski kwaye begcina ukumiliselwa kwezoluntu njengoko babecetyisiwe ngabaququzeleli kodwa balumkiswa ukuba ukuba bayaqhubeka nokujikeleza, bazakubanjwa. I-Kim Kardashian bilionea yeeNdaba.
Ukulandela isilumkiso, abaqhankqalazi baqhekeza baba ngamaqela amancinci kwaye bajikeleza ngeendlela ezahlukeneyo zokunciphisa inani lokuqokelela. Amapolisa alandela kwaye ahlutha iqela ngalinye, emisa uqhankqalazo kwaye kwezinye iimeko esebenzisa i-strank grenades ukusasaza izihlwele.
4. Intsholongwane yomkhuhlane 'ngokubakho kubhubhane' efumaneka eTshayina
Uhlobo olutsha lomkhuhlane olunokubakho ubhubhane luchongiwe e-China zizazinzulu. Ivele kutshanje kwaye iqhutywa ziihagu, kodwa zinokosulela abantu, batsho. Abaphandi banenkxalabo yokuba inokuthi iguqukele phambili ngakumbi ukuze isasazeke ngokulula isuka komnye umntu iye emntwini, kwaye ibangele ukuqhambuka komhlaba.
Ngelixa ayiyongxaki ikhawulezayo, bathi, inazo zonke iimpawu zokwenza ulungelelwaniso nosulela kakhulu abantu kwaye ifuna ukubekwa esweni. Njengoko intsha, abantu banokuba nokugonyelwa okuncinci okanye ukungabinayo ntsholongwane.
5. UJuventus 'Miralem Pjanic kunye no-Arthur's Arthur kwi-swap deal
UMiralem Pjanic wajoyina uJuventus ovela eRomania ngo-2016
Umdlali ophakathi kweJuventus Miralem Pjanic Uza kujoyina iBarcelona ekupheleni kwesizini kwisivumelwano esijongene neBrazil yamazwe aphesheya Arthur. I-Bosnian Pjanic, engama-30, ivumile isivumelwano sokuxabisa i-60m yeuros (£ 54.9m), nge-5m (i-4.6m) eyongezelelweyo kwizongezo. Wenza ukubonakala okungama-214 kweentshatsheli zikaSerie A Juve emva kokujoyina ngo-2016.
Ngeli xesha, uArthur, 23, ojoyine iBarca esuka eGreymio kwisivumelwano seminyaka emithandathu ngo-2018, uza kufuduka aye kuthi ga kwi-72m yeeuros (£ 66m), nge-10m (i- $ 9.1m) kwizongezo. UArthur uza kuhlala neBarcelona de kuphele isizini. I-Kim Kardashian bilionea yeeNdaba.
Bona kwakho: Iimpawu zikaKim Kardashian zingaDibani ngokuDibeneyo kunye neSpotify
Uhlobo Rave Juni 30, 2020